Isuzu Bighorn ကား ရောင်းရန် Carmudi Myanmar [Burma]
Off-Road Vehicle / Suv (12)
White Isuzu Bighorn 1997 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှ...
Black Isuzu Bighorn 2000 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှ...
Green Isuzu Bighorn 1999 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှ...
Green Isuzu Bighorn 1997 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှ...
Brown Isuzu Bighorn 2000 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှ...
Silver Isuzu Bighorn 1998 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ပြတ...
green Isuzu Bighorn 1998 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ပြတင...
Pearl White Isuzu Bighorn 1997 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passen...
Dark green Isuzu Bighorn 1997 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger....
Black Isuzu Bighorn 2000 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Pa...
Red Isuzu Bighorn 1999 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passeng...
Pearl white Isuzu Bighorn 1999 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag:...
အရောင်း အ၀ယ် အေးနေတဲ့ အထဲ ဆူဇူကီး SUV ကားတွေက ပါရှိနေပါတယ်။ ပြည်တွင်းတွင် အီဆူဇူရဲ့ အလတ်စား SUV တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ ဘစ်ဟွန်းကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး တစ်ခြား နောက်ခန်း တစ်ခန်းခွဲဖြစ်တဲ့ ထရပ်ပုံစံ တွေကိုလည်း တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အီဆူဇူ အမှတ်တံဆိပ်ဟာ လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်နဲ့ ဘတ်စ်ကား အမျိုးအစားထဲမှာ ထင်ရှားပါတယ်။ ပြည်တွင်းထဲ တွင်ကျယ်စွာ လေလံကနေ ရရှိနိုင်တဲ့ အထဲ Trooper လို့လည်းခေါ်တဲ့ Bighorn ကားတွေကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အီဆူဇူ ဘတ်စ်တွေဆို ပြည်တွင်းက၀ယ်ယူသူများ အနေနဲ့ လူကြိုက်များ၊ အမေးများလျက်ရှိပြီး အဓိကက ဈေးချိုတဲ့ အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
အီဆူဇူ Bighorn ဟာ အလတ်စား ဘီးအမြင့်စား SUV မျိုးနွယ်ဝင် ဖြစ်သကဲ့သို့ သူက ပြည်တွင်းမှာ ဈေးသက်သာတဲ့ အတွက် ၀ယ်စီးသူ အမြောက်အမြား ရှိနေပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ မော်ဒယ်က ၂၀၀၂ ထိပဲ နောက်ဆုံးရှိတာမို့ စလစ်ကပ်ဝယ်ယူ မယ်ဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။၂၀၀၂နောက်ပိုင်းကို အီဆူဇူ Bighorn တွေ ထပ်မလာတော့ပါဘူး။ ပစ်ကပ် တစ်ပိုင်း၊ လူစီး တစ်ပိုင်း ကားဝယ်စီးချင်သူများအတွက် ၂၀၀၂နဲ့ နောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ ပထမ မျိုးဆက်နဲ့ ၂၀၁၂ နဲ့ နောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ အီဆူဇူ D- Max ဆိုပြီး ရှိပြီး နာမည်ကတော့နိင်ငံ အလိုက်ခေါ်ဝေါ်မူတွေ ပြောင်းသွားကာ သြစတြီးရီးယားတို့လိုနိင်ငံတွေဆိုရင် Holden Rodeo လို့ခေါ်ပြီး Chevrolet Colorado လို့လည်း အခြားနိင်ငံတွေမှာ ခေါ်ပါတယ်။
ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်အစရှိသဖြင့် ရရှိနိင်မှာ ဖြစ်ပြီး တာဗို့ပါတဲ့ ဒီဇယ်ကားဆိုရင် အင်ဂျင် ၃.၀ လီတာ ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်ကား ဖြစ်တဲ့ အတွက် ညာမောင်း ဖြစ်မှာ ဖြစ်ပြီး ၀ယ်ယူချင်တယ်ဆိုရင် ပြည်တွင်း ဂျပန်လေလံ ၀ဘ်ဆိုဒ် တော်တော်များများမှာ ကားဂရိတ် အမျိုးအစား၊ မော်ဒယ် စသည့်ဖြင့် စိတ်ကြိုက် စုံးစမ်း ၀ယ်ယူနိင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မြို့ကြီးများရဲ့ လမ်းများနဲ့ အထူးအပ်စပ်မူရှိပြီး အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပတ်ရစ်ကားတွေကို ၀ယ်ယူသူများ အနေနဲ့ သတိပြုရမဲ့ အချက်တစ်ခုမှာ အရင် ၀ယ်ယူသူများရဲ့ ဝေဖန်မှုများ အရ ကီလိုမီတာ ၁ သိန်း နီးပါးလောက်မှာ တာဗို့ကနေ ဆူညံသံ ထွက်တာကို တွေ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အသစ်တာဗို့ တစ်ခုနဲ့ လည်ပြီး ချိန်မှာတော့ အဆင်ပြေသွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဆူဇူကီး ဘစ်ဟွန်းတွေဟာ တိုယိုတာ ဟိုက်လပ်စ် ဆပ်စ်လို့ နှာပေါက်တွေလည်း ပါဝင်ပြီး တိုယိုတာ SUV စီးရီးတွေနဲ့ အရွယ်အစား အလုံးအထည် တို့ဆင်ပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ ဒီဇိုင်းအားဖြင့်တော့ ကွာတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရှေ့က မီးလုံးတွေ အပြင် ရှဲလ်တွေလည်း ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ ဒီဇိုင်း အားဖြင့်တော့ အနည်းငယ် ရိုးရှင်းတာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကားနောက်ပိုင်းကို နောက်ကြည့်မှန်တွေ၊ နောက်ဘီး အပိုတွေ အတွက် နေရာတို့ကို ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ အတွင်းပိုင်းက ဖွဲ့စည်းမှု သန့်ပြန့်ပါတယ်။ ရိုးရှင်းပေးမဲ့ လှပတဲ့ အပြင်အဆင်နဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၂ ခုနှစ် မော်ဒယ်ထိ သာထုတ်တဲ့ အတွက် နောက်ထွက် မော်ဒယ်တွေ လောက်တော့ မဆန်းသစ်တာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဒီဇယ် အော်တိုကားတွေ ဖြစ်ပြီး လေအိတ် နှစ်လုံး၊ အဲယာကွန်း၊တာဗို့၊ ပါဝါ စတီယာရင် ၊ အလွိုင်းဝှီးစတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေ ပါရှိပြီး တံခါး (၅) ပေါက် အက်စ်ယူဗီ ကား ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်တွင်း အီဆူဇူ ဈေးကွက် အနေနဲ့ Bighorn ဆိုလျှင် မော်ဒယ် ၂၀၀၀ အောက် တစ်ပတ်ရစ်ကို ကျပ် သိန်း ၁၈၀ ~ ၂၀၀ လောက် ပျဉ်းမျှ ရှိပါမယ်။ အီဆူဇူ D- Max ထဲကဆိုလျှင်တော့ သူလည်း ၂၀၀၂ ,၂၀၀၃ လောက်ကို ကျပ်သိန်း ၁၈၀ ~ ၂၀၀ လောက်ဖြင့် ရနိင်ပြီး ရိုးရိုး အရှေ့ နှစ်ခန်းပါ အီဆူဇူ ပစ်ကပ်ထဲကဆိုလျှင် ၁၀၀ ကျော်ကျော်လောက်ဖြစ် ရရှိနိင်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ အီဆူဇူ လုပ်ငန်းသုံးကားများ အနေနဲ့ တစ်ပတ်ရစ် ဈေးကွက်ထဲက အီဆူဇူ ELF ဆိုလျှင် မန်နျူးယယ် ဒီဇယ်ကို ကျပ်သိန်း ၁၇၀ နဲ့ ၁၈၀ ပတ်ဝန်းကျင်လောက်တွင် ရရှိနိင်ပါမယ်။
မော်ဒယ် အနည်းငယ်နိမ့်ပေးမဲ့လို့ အင်တာ ကူလာ ပါရှိတဲ့ ဒီဇယ် အင်ဂျင် ကြီးတွေက စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်စီးနဲ့ လူစီး အဖြစ် သုံးလို့ကောင်းတဲ့ ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အရောင်း သိပ်မရှိပေမဲ့ ဈေးနှုန်း လည်း သက်သာလို့ သုံးသပ် ၀ယ်ယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိပ်ဆုံး Isuzu မော်ဒယ်
Isuzu 2.5 TD